အတုလ သာသနာပိုင် ဆရာတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
အတုလဆရာတော် ( ၁၀၆၂-၁၁၄၈ ) ရတနာသိင်္ဃမြို့နန်းကို တည်ထောင်တော်မူသော အလောင်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် တွင် သာသနာပိုင် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော အတုလဆရာတော်အား ဒီပဲယင်းမြို့ ကျေးကိုးကျေးအပါ အဝင် ဥသျှစ်ကျေးရွာ၌ သက.ရာဇ် ၁၀၆၂-ခုတွင် ဖွားမြင်သည်။ အချို့မူတွင် ၁၀၇၆-ခုဟုလည်း အဆိုရှိသည်။ နံတော် ဗုဒ္တဟြူးသား ဖြစ်. ငယ်မည်မှာ မောင်ပန်းထွေးဟူÄ။ ရဟန်းပြုသောအခါ ဘွဲ့မည်မှာ သျှင်ယသ ဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်နန်းတည် အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ဆရာတော် သျှင်ယသအားကြည် ညိုသဖြင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်တော်မူÄ။ ဆရာတော်အား ] အတုလယသ မဟာဓမ.ရာဇဂု.ု }ဟူ သော ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ဆက်ကပ်. သာသနာပိုင်လည်း ခန့်အပ်လေသည်။ ထိုဘွဲ့တံဆိပ်တော် ကို အစွဲပြု. ဆရာတော်အား ] အတုလဆရာတော် } ဟူသောအမည်သည်ထင်ရှားလာခဲ့လေသည်။ အတုလဆရာတော်သည် ထိုခေတ်က သင်္ကန်း.ုံဂိုဏ်း၊ သင်္ကန်းတင်ဂိုဏ်းဟု နှစ်ဂိုဏ်းရှိ့ ရာ သင်္ကန်းတင်သောဂိုဏ်း ဖြစ်ပေသည်။ သင်္ကန်းတင်ဂိုဏ်း၊ သင်္ကန်း.ုံဂိုဏ်းတို့သည် သာသနာလင်္ကာရစာတမ်း စသည်တို့က̈ ၁၀၇၆-ခုတွင် နန်းတက်သော ဆင်ဖြူရှင်တနင်္ဂနွေမင်း လက်ထက်တွင် ကွဲပြားကြသည်ဆိုÄ။ သာလွန်မင်း လက်ထက်ကလည်း ထိုကိစ.ကို သာလွန်မင်း တရားက တောင်ဖီလာပုဂိ.ုလ်ကျော်အား မေးလျှောက်ရာတွင် တောင်ဖီလာဆရာတော်က တင်ခြင်း .ုံခြင်း အမှုများမှာ ပုဂံခေတ်ကပင်လျှင် ထင်းရှားရှိခဲ့ကြောင်းကို ဖြေကြားတော်မူသည်။ ထိုအကြောင်းကို သာလွန်မင်းအမေးတော်ပုံကျမ်းက̈ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားလေသည်။ အတုလဆရာတော်သည် သာသနာပိုင် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အလောင်းမင်းတရား လက်ထက်တွင် မိမိအတင်ဂိုဏ်းမှာ အရေးသာလျက် ရှိÄ။ အလောင်းမင်းတရားကြီး ကိုယ်တိုင် ကလည်း သာသနာပိုင် အတုလဆရာတော်Ä အလိုသို့ လိုက်. နိုင်ငံတော်အတွင်းဝယ် အတင်အ.ုံ ကွဲပြားခြင်း မရှိစေရဘဲ ဒုကုဋ်တင်နွယ် တစ်ဂိုဏ်းတည်းသာ ဖြစ်စေလေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ကန်း.ုံနွယ်ဖြစ်သော ထေရ်သျှင်ရဟန်းတို့သည် မည်သို့မျှ ပြောဆိုခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ကြပေ။ အလောင်းမင်းတရားသည် အတုလဆရာတော်အား သာသနာရေးသက်သက်က̈သာ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရေးပြည်ရေး အုပ်ချုပ်ရေးများက̈လည်း အားကိုးတကြီး ရှိတော်မူသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အချို့သော စာပေတို့က̈ အလောင်းမင်းတရားကြီး အောင်မြင်မှု ရခဲ့ခြင်းမှာ အတုလဆရာတော်Ä နည်းပေးဆုံးမမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားကြလေသည်။ .ကဲ့သို့ အတုလဆရာတော်က အလောင်းမင်းတရားကြီးအား ဆုံးမဩဝါဒပေးသော တရားစာပုဒ်ပေါင်း ၇၂-ပုဒ်မျှ ရှိသည်ဟု သိရှိရပေသည်။ ထို့ပြင် အတုလဆရာတော်သည် တိုင်းရေး ပြည်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း.လည်း အလောင်း မင်းတရားÄ ဘက်မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့Ä။ အလောင်းမင်းတရား လက်ထက်တွင် ခြားနားနေသော သတိုးသိင်္ခသူတို့အထံသိ်ု့ စည်းလုံးမှုအတွက် မေတ.ာစာများ ရေးသား. စေ့စပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့Ä။ .ကဲ့သို့ တိုင်းရေးပြည်မှုတို့က̈ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသောကြောင့် လည်း အလောင်းမင်းတရားသည် ဆရာတော်အား ပစ.ုပ.န်အတွက် ကိုးကွယ်သည်ဟု အချို့စာများ က̈ ရေးသားကြလေသည်။ အတုလဆရာတော်သည် သာသနာပိုင် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိမိလက်ထက် ဖြစ်ပေါ်လာသော သာသနာရေးနှင့် ဆိုင်သော မှုခင်းအရပ်ရပ်တို့ကို စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူရÄ။ ဆရာတော် ဆုံးဖြတ်ထားသော ဖြတ်စာများမှာ နောင်အခါတွင် တစ်စောင်တစ်ဖွဲ့ စုစည်းမိသဖြင့် ] အတုလဆရာတော်ဖြတ်ထုံး } ဟူ. ဓမ.သတ်စာပေနယ်တွင် နေရာရရှိခဲ့ပေသည်။ အတုလဆရာတော် သည် သက.ရာဇ် ၁၁၂၀-ခု ဝန်းကျင်တွင် မိမိ.ုံးတော်သို့ ရောက်ရှိလာသော ကျွန်မှု ကျောင်းမှု မြေမှုစသော မှုခင်းပေါင်း ၅၅-ခုကို ပေါင်းစည်း. ဖော်ပြထားလေသည်။ သာလွန်မင်းတရားသည် အမှုကိစ.ရှိလျှင် မိမိဆရာဖြစ်သော တောင်ဖီလာဆရာတော် အား လျှောက်ထားလေ့ ရှိသကဲ့သို့ အလောင်းမင်းတရားသည်လည်း မေးဖွယ်ကိစ. မှန်သမျှကို သာသနာပိုင် အတုလဆရာတော်အား လျှောက်ထား မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့မေးမြန်းသော ပုစ.ာတို့ကို စုပေါင်း. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရာ ] နန်းစဉ်ပုစ.ာအဖြေ } ဟူ. ယနေ့တိုင် ထင်ရှားလေသည်။ ထို့ပြင် ] ဇမ.ူကျော်သောင်း၊ မြေကြီးစောင်းမျှ၊ } အစချီသော အလောင်းမင်းတရားÄ ကျွန်ရင်း ၆၈-ယောက်တို့ကို ဖွဲ့ဆိုထားသည့် ] ရဲတင်းလင်္ကာ } ကိုလည်း အတုလဆရာတော်ပင် ရေးခဲ့သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အချို့ကမူ အတုလဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် ရေးသားသည်ဟု ဆိုကြသေးသည်။ ခင်ကြီးဖျော်Ä ဘဝအတ္တ ုပ.တ်နှင့် စာပေလက်ရာများကို လေ့လာရာက̈ .ကဲ့သို့ တိုင်းရေးပြည်မှုတို့တွင် ရေးသားလေ့ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရÄ။ ကဗျာ့ပန်းကုံးတွင်မူ- ]] ရဲတင်းလင်္ကာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ စာဟန် စာသွားမှစ. စကားအသုံးအနှုန်း တို့မှာ လူမည် ဦးပန်းထွေး၊ ရဟန်းဘွဲ့ ဦးယသတည်းဟူသော အတုလသာသနာပိုင်ဆရာ တော်Ä လက်ရာနှင့် တူနေကြောင်း တွေ့ရÄ။}}- ဟူ. မှတ်ချက်ချထားÄ။ ထို့ကြောင့် ရဲတင်းလင်္ကာကို ရေးသားသူမှာ အတုလဆရာတော် ဦးယသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း တစ်ခေတ်တည်း ပေါ်ထွန်းနေသော အတုလဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်နှင့် လွဲမှားနေသည်ဟု မှတ်ယူဖွယ် ရှိပေတော့သည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးသားတော် နောင်တော်ကြီးမင်းလက်ထက် သက.ရာဇ် ၁၁၂၄- ခုနှစ်တွင် တောင်တွင်းဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်အား ကျောင်းတင်လှူ ကိုးကွယ်လေသည်။ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်မှာ အ.ုံဂိုဏ်းဝင် တစ်ပါးဖြစ်Ä။ ထို့ကြောင့် အ.ုံဂိုဏ်းဝင်တို့က အတင် အ.ုံပြ.နာကို ဆက်လက် ဖြေရင်းရန် ဘုရင့်ထံ စာဆက်သွင်းကြÄ။ ထိုအခါ အတုလဆရာ တော်နှင့် အတင်ဂိုဏ်းဝင် ဆရာတော်တို့က ရှေးမင်းများ လက်ထက်ကပင် ပြေငြိမ်းပြီး ဖြစ်သော ကြောင့် ဖြေရှင်းစရာ မလိုကြောင်း ထပ်မံ စာဆက်သွင်းကြပြန်ရာ ပြောဆိုခွင့် မရကြပေ။ စဉ့်ကူးမင်းလက်ထက် သက.ရာဇ် ၁၁၄၁-ခုနှစ်တွင် အတင် အ.ုံကိစ. ဖြစ်ပေါ်လာပြန် သည်။ ထိုအခါက̈မူ ဂိုဏ်းနှစ်ခုမှ ဆရာတော်ကြီးများသည် တင်သင့် .ုံသင့် အဆိုကို စင်ပြိုင် ပြောဆိုကြရသည်။ ထိုဆရာတော်ကြီးများÄ ပြောဆိုချက်တို့ကို စုပေါင်း. မှတ်တမ်းတင်ထားရာ ] တင်သင့် .ုံသင့် အဆိုစာတမ်း } ဟူ. ထင်ရှားရှိလေသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုကြရာက̈ အ.ုံဂိုဏ်းဝင်တို့က တရားကျမ်းဂန်နှင့် လျော်ညီသည်ဟုဆိုကာ အတုလဆရာတော်တို့ ဦးဆောင်သော အတင်ဂိုဏ်းမှာ .ှုံးနိမ့်သွားရလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် သက.ရာဇ် ၁၁၄၂-ခုနှစ် နယုန်လဆန်း ၁၅-ရက်နေ့တွင် သျှင်သာမဏေတို့သည် မြို့တွင်း ရွာတွင်းသို့ ဝင်သည့်အခါ သင်္ကန်းကို .ုံပြီးမှ ဝင်ကြစေရန် အမိန့်တော်ပြန်တမ်းကို ထုတ်ပြန်လေသည်။ ထိုအခါမှ စ. အ.ုံဂိုဏ်းဝင်တို့သည် အခွင့်အရေးများ ရရှိလာကာ မိမိရေးသားသော စာပေများက̈ အတုလဆရာတော်အား အဓမ.ဝါဒီ တစ်ပါးအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြကြÄ။ အမှန်မူ သင်္ကန်း.ုံမှု တင်မှု ကိစ.အသေးအဖွဲမှ လွဲ. အတုလဆရာတော်တို့ ဂိုဏ်းသည်လည်း သီလသိက˝ာနှင့် ပြည့်စုံသောဂိုဏ်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ဝံသမာလာကျမ်းက̈ကား နှစ်ဂိုဏ်းလုံးပင် ဓမ.ဝါဒီချည်း ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားÄ။ အတုလဆရာတော်သည် စာရိတ.မွန်မြတ်သူ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သီလဝိသောဓနီကျမ်းက̈ ရေးဆိုထားလေသည်။ ဘိုးတော် ဗဒုံမင်း နန်းတက်သော အခါက̈ကား အ.ုံဂိုဏ်းအင်အားမှာ ကြီးမားလာÄ။ အတုလဆရာတော်တို့မှာ အားနည်းနေပြီဟု ဆိုနိုင်Ä။ ဗဒုံမင်းကလည်း မင်းဖြစ်. မကြာမီပင် သာသနာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာက̈ အတင် အ.ုံပြ.နာတို့ကို အဓိကထား လျက် ရှင်းလင်းမည်ဟု ရည်ရွယ်. တင်သင့် .ုံသင့်ဟူသော အယူဝါဒကို စစ်ဆေးကြည့်.ှုရာ .ုံသင့်သည့် ဝါဒသာလျှင် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပြုကြလေသည်။ ထိုကိစ.နှင့် ပတ်သက်. အယူတော်မင်္ဂလာလည်း ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းÄတိုင်ပင်ရာ ပုဂိ.ုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့Ä။ ပြ.နာနှင့် ပတ်သက်. အယူတော်မင်္ဂလာအမတ်အား ဗဒုံမင်းက မေးမြန်းရာတွင် အယူတော်မင်္ဂလာက မိမိသည် မြို့တွင်းသို့ လှည့်လည်ရာတွင် စနည်းတစ်ခုကို ရခဲ့ကြောင်း ထိုစနည်းမှာ- ]] ဦးပြီးယောကျာ်း ၊ လက်ဖက်စား ၊ တိုင်းကားပြည်ရွာ ဆူလတံ.့ ။ ဦးပြီးမိုးကြိုး ၊ ပစ် ခတ်ချိုးက၊အခိုးနေလမှိန်လတံ.့။ဦးပြီးလူမော်၊ရေကြောင်းပျော်သည်၊လှေပေါ်ဆောင်းမှောက် ဖြစ်လတံ.့။ ထိုရောအခါ ၊ သာသနာသည် ၊ ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းလတံ.့။ }}- ဟူ. လျှောက်ထားသည်။ .နေရာက̈ ]] ဦးပြီးယောကျာ်း၊ လက်ဖက်စား }} ဆိုသည်မှာ အတုလဆရာတော်သည် အမှုအခင်းများကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ရာက̈ စိတ်တူလက်ဖက်စားစေသောကြောင့် .သို့ဖွဲ့ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ စနည်းဆိုသော စကားသည် ဟုတ်မည်၊ မဟုတ်မည်ကိုကား ခွဲခြားရန် ခက်ခဲ လှဘိသည်။ အယူတော်မင်္ဂလာအမတ်သည် .င်းကိုယ်တိ်ုင် ဖန်တီးလျှောက်တင်ချက်များ ဖြစ်လေသလောဟု သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိပေသည်။ အယူတော်မင်္ဂလာသည် အတုလဆရာတော်အား အမျက်ပွား. မုန်းထားနေသည်ဆိုက ထိုစနည်းသည် ဧကန်ဖန်တီးချက်ဟူ. ဆုံးဖြတ်ရန် မခက်ခဲချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ခါက အတုလဆရာတော်နှင့် အယူတော်မင်္ဂလာတိ်ု့ ဆုံတွေ့ကြရာတွင် အတုလဆရာတော်က ]] မင်္ဂလာအထူး ၊ မင်္ဂလာအကြူး ၊ မင်္ဂလာအ.ူး }}ဟု ခွန်းချင်း စပ်ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအခါ အယူတော်မင်္ဂလာက မခံရပ်နိုင် ဖြစ်ကာ ]] အတုလဆရာတော် ယခုမှ တစ်ခါပေါ်၊ တစ်စုက မနာသော် }} ဟူ. ခွန်းချင်းဖြင့် ပြန်လည် နှုတ်လှန်ထိုးခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအခါက မကျေနပ်မှုသည် အယူတော်မင်္ဂလာÄ နှုတ်ဖျားတွင် စနည်းဟူသော စကားဖြင့် ဖန်တီး . လျှောက်တင်လေသလော ဟု စဉ်းစားဖွယ် ဖြစ်ပေသည်။ ဗဒုံမင်းတရားသည်လည်း .သို့ လျှောက်တင်ချက်ကို နာခံ. အတုလဆရာတော်နှင့် အပေါင်းပါတို့အား အဓမ.ဝါဒီသမားများဟု အယူရှိကာ သေးသိမ်သော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် အောက်ပါ အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လေသည်။ ]] ဥသျှစ်ကျေးနေရင်း အတုလယသ မဟာဓမ.ရာဇဂု.ု တံဆိပ်ခံ ငပန်းထွေးသည် ခ မည်းတော် အလောင်မင်းတရားကြီးဘုရား၊ နောင်တော်မင်းတရား နှစ်ပါးလက်ထက် ရဟန်း သျှင်လူ ပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်းတို့ကို နတ်ရွာဖီလာဖြစ်. အပါယ်လေးပါး နစ်မွန်းလေ အောင် ဘုရားသခင် ဟောတော်မူသည့် ပါဠိ အဋ္ဌကထာ ကျမ်းဂန်ထွက် ရှိရာ မဖြစ်စေရ၊ ပါဠိ အဋ္ဌကထာ ဋီကာနှင့် ဆန့်ကျင်သော သာသနပစ.တ.ိက အဓမ.ဝါဒီ ပုဂိ.ုလ်တို့ အလိုရှိရာ စီရင်ရေးသားထားသော စူဠဂဏ.ိကျမ်းကို အခိုင်ပြု. ဟောပြောပြသ ဆိုဆုံးမသည့်အတွင်း အကုသိုလ်သားကြီး အဓမ.ဝါဒီ မိစ.ာစွဲသော သူတို့ကို သဗ.ညုဘုရားသခင်မှ ထုတ်နုတ်ကယ် တင်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ဖြစ်သည်။ ငပန်းထွေးနှင့်အတူ ဝါဒသဘော တူမျှသော သာသနာ့ ပစ.တ.ိက ငကျော်လေး၊ ငတုတ်ဖြူ၊ ငပေလိပ်၊ ငပန်းထွေးကို ခေါ်ရင်းကာလ အယူတူချက် တည်ပါလူ ငမြတ်ကျော်၊ ငကြာဘက်၊ ငရာ၊ ငသူ၊ ငလွမ်း တို့ကို ရွှေပြည်တော်ပတ်လည် နေပြန်စေလျှင် ရဟန်းသျှင်လူ ပြည်သူ ပြည်သားတို့ အယူမှားကြ. အပါယ်လေးပါးက̈ နစ် မွန်းမည် ဖြစ်သည်။ သင်းတို့တစ်စုကို လူဝတ်လဲစေပြီးလျှင် အစုသစ်တောသို့ အသီးအသီး တစ်ယောက်စီပို့။ }} ကဝိသာရမဥ.ူသာကျမ်းတွင်ကား အတုလဆရာတော်ကို နှင်ထုတ်သော အခါက̈ အဝတ် မပါ ဗလာကိုယ်ချည်းလည်းကောင်း၊ ဓာလှံများ ကာရန်.လည်းကောင်း၊ စလောင်းဖုံးနှင့် ထမင်းကျွေး.လည်းကောင်း၊ ကမ.ည်းစာများ ရေးသား.လည်းကောင်း၊ သံချပ်များ ရေးထိုး. လည်းကောင်း နှင်ထုတ်ပုံကို တခမ်းတနား ရေးသားထားလေသည်။ .သို့နှင်ထုတ်သည်ကို ရှေးရေး သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာတို့က̈ အဆိုအမိန့် မရှိပေ။ နှောင်းခေတ်သုတေသီတို့ကမူ ကျမ်းဆရာÄ ဖန်တီးချက်ဟု ယူဆကြလေသည်။ .သို့ဖြင့် အတုလဆရာတော်သည် ဘိုးတော် ဗဒုံမင်းÄ အတင်းအကြပ်လူဝတ်လဲ. နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရလေသည်။ ထိုကိစ.နှင့် ပတ်သက်. ဗဒုံမင်းတရားသည် အမှားကြီး တစ်ခုကို ကျူးလွန်ကြောင်း မှော်ပီဆရာသိန်းÄ ပစပ်ရာဇဝင်တွင် ဘုံကျော်ဆရာတော်ကြီးÄ ပုရပိုက်မှတ် စုမှ ကူးယူဖော်ပြထားသည်။ ထိုမှတ်စုတွင် ဗဒုံမင်းတရားသည် အမှားကြီး လေးခုကို ကျူးလွန်ထား ကြောင်း၊ ထိ်ုအမှားကြီးတို့မှာ- ၁။ ညီတော် ပင်းတလဲမြို့စား မင်းသားကိ်ု ရေက̈ ချ. ကွပ်မျက်တော်မူသော အမှားတစ်ချက်၊ ၂။ အတုလဆရာတော်နှင့် ဆရာတော် ခြောက်ပါးကို အတင်းအကြပ် လူဝတ်လဲစေသော အမှား တစ်ချက် ၊ ၃။ ရဟန်းတော်များကို သိက˝ာသစ်တင်စေသော အမှားတစ်ချက် ၊ ၄။ မင်းကွန်းစေတီတော်ကြီးကို တည်လုပ်သော အမှားတစ်ချက် - တို့ ဖြစ်ပေသည်။ အတုလဆရာတော်ကြီးသည် မင်းပြစ် မင်းဒဏ်သင့်သဖြင့် သက.ရာဇ် ၁၁၄၆-ခုနှစ်တွင် လူဝတ်လဲရသောကြောင့် ရဟန်းဝါတော် ၆၄-ဝါ ရတော်မူÄ။ လူဝတ်လဲ. နှစ်နှစ်အကြာ နေပြီးလျှင် သက်တော် ၈၆-နှစ်အရတွင် သက.ရာဇ် ၁၁၄၈=ခုနှစ်က̈ ဘဝနတ်ထံ ပြောင်းြွကစံလွန် ခဲ့လေသည်။
↑ ကဗျာပ့ နး်ကးုံ ၊ သာသနာလင်္ကာ ရစာတမး် ၊ တငသ် င ့် .သုံ င ့် အဆစို ာတမး် ၊ အတလု ဆရာတော် ဖြတ်ထုံး၊ မုံရွေးဆရာတော့်မှတ်စု၊ စာပေရိပ်မွန်၊ ရာဇဝင်ချုပ်ကျမ်းကြီး၊ သာသနဗဟု.ုတ ပ.ကာသနီကျမ်း၊ ကဝိသာရမဥ.ူသာကျမ်း၊ ပစပ်ရာဇဝင်၊ လုပ်သားသတင်းစာမှ ဦးသောင်း (ရေဦး)Ä ] ဗဒုံမင်းလက်ထက် သာသနာ } ဆောင်းပါး၊
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အတုလ_သာသနာပိုင်_ဆရာတော်&oldid=461969" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။